Ny tombontsoa goavana avy amin'ny votoatin'ny vovobony araka ny fananana seminera manam-pahaizana
Ny votoaty entinay amin'ny vohikala hafa ary ampiasaina amin'ny tranokalanay manokana na blôgy. Google, Bing, ary Yahoo dia miankina amin'ny vatsy sy ny mpikirakira tranonkala amin'ny alàlan'ny tranonkala samihafa. Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fitomboan'ny orinasa ary mety ho an'ny mpandrindra ny programa sy ny mpandrindra. Ny orinasa madinika sy orinasa lehibe dia manala matetika ny votoaty ary mamonjy azy amin'ny tahiry manokana. Ny tombontsoa lehibe amin'ity teknika ity dia voalaza etsy ambany:
1. Azo ampiasaina amin'ny orinasa:
Yelp, Zomato, Better Business Bureau, Amazon, Google, Trustpilot, ary orinasa hafa dia mampiasa ny votoaty voasokajy tsy tapaka. Miankina amin'ny mpivaro-tsakafo samihafa izy ireo noho ny maha-ara-drariny azy ireo sy ny fahamarinany. Marika maro samihafa no mitodika any amin'ireo tranonkala media sosialy mba hampiroboroboana ny vokatra sy ny tolotra. Raha manaisotra ny famaritana ny vokatra sy ny sarin'ireo tranokala e-commerce sy tambajotra sosialy ianao, dia hanana safidy tsaratsara kokoa hanatsarana ny orinasa. Ny Webmasters sy ny mpandrindra ihany koa dia manaparitaka ny profiles LinkedIn ary manangona fampahalalana ho an'ny fampiasana offline.
2. Tolotra samihafa sy vokatra samihafa:
Androany, aleon'ny rehetra mividy vokatra sy serivisy avy amin'ny Alibaba, eBay, ary Amazon. Amin'ny maha webmaster anao, afaka manangona ny torolàlana samihafa ianao ary mahazo fampahalalana ilaina ho anao. Rehefa voadika ny votoaty dia azonao atao mora foana ny mampitaha ny tsipiriany momba ny vokatra, ny fampahafantarana ny sarany ary ny sary. Manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisinao izany. Raha toa ka mihazakazaka masoivoho fiara ianao ary te-hametraka mpanjifa marobe, dia tokony hokarohina ny votoaty avy amin'ny toerana samihafa ary hampitaha ny fampahafantarana momba ny vidin'ny fiara. Ohatra, i Uber sy Careem dia miankina amin'ny votoaty entina hanatsarana ny orinasany. Manome antsipiriany momba ny mpamily, ny fiara ary ny fampahafantarana ny vidiny. Ireo orinasa ireo dia mihamatotra ny fanantenantsika amin'ny alàlan'ny fanaovana asa fanompoana azo itokisana.
3. Ny fanasitranana ao amin'ny votoaty sy ny fikarohana:
Ireo mpianatra, manam-pahaizana, mpahay siansa, dokotera ary mpanandro dia mila manangona votoaty mba hahavitana ny asany. Manangona vaovao momba ny lohahevitra manokana avy amin'ny tranonkala an'arivony izy ireo. Lahatsoratra an-tapitrisany no avoaka isan'andro, ary manampy amin'ny fanitarana ny sehatry ny fikarohana. Azonao atao ny manatsara ny fikarohanao ary mamonjy ny fotoanao sy ny volanao mandritra ny fanatanterahana ny asanao.
4. Ny drafitra ara-bola mahomby:
Ny votoaty dia nofonosina ho an'ny drafitra ara-bola sahaza. Azonao atao ny mamantatra ny angona momba ny varotra, ny fampiasam-bola, ny fironana amin'izao fotoana, ary ny andrasan'ny orinasa. Import. Ity sy Octoparse dia manampy ny angon-drakitra mahasoa avy amin'ny aterineto ary ahodinkodina araka ny zavatra takinao.
5. Fividianana sy fandraisam-bahiny:
Raha te hividy na hanofana zavatra ianao, dia mila mamenina ny votoaty ary mahatakatra ny fiantraikan'ny teti-bola. Azonao atao ny mamorona mora kitendry, manamboatra lisitr'ireo mpikarakara, ary manangona tsipiriany momba ny fananana manokana. Toy izany koa, raha te-hivarotra zavatra ianao dia tsy maintsy manangona ary manangona angon-drakitra momba ny trano sy tanàna.
A fitaovam-pako dia mamoaka angon-drakitra mahasoa avy amin'ny tranonkala samihafa, manamboatra ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana, ary manao asa isan-karazany. Ny Webmasters sy ny mpandrindra dia mampiseho ny fehezanteny RSS, ary ny fahana Twitter dia ao amin'ny tranonkala. Fomba tsara handraisana mpamaky bebe kokoa, fa ny fampisehoana fampahalalana be loatra dia mety hanimba ny toerana misy ny habaka. Noho izany, tokony hampiseho ny votoaty ilaina sy marina fotsiny ianao Source .